Yusuf Garaad: Kutlo xey tahay?
Kutlo xey tahay?
Kutlo waa eray asalkiisu carabi yahay oo loola jeedo kis, koox ama kabbo. Ereyga Kutlo wuxuu ku soo biiray qaamuuska aan rasmiga ahayn ee siyaasadda Soomaalida. Waxaa la baxay Mudanayaal Baarlamaanka ka tirsan oo danwadaag ah. Dantaasi waxay noqon kartaa dan guud ama mid gaar ah. Kutlad waxay ahaan kartaa danwadaag, carowadaag, aragtiwadaag, talowadaag ama intoo dhan. Kutladaha ugu codka dheer waxay kala yihiin.
Badbaado Qaran waxay u soo ifbaxday kuna midowday isku daygii fashilmay ee lagu badbaadin rabay Xukuumaddii Ra’iisal Wasaare Cabdiweli Shiikh Axmed. BQ waxaa u madax ah, Cabdi Axmed Dhuxulow oo reer Ceel Buur ah. Waxaa laga yaabaa in ay tahay tan ugu xubno badan Kutladaha Baarlamaanka.
Toosinta Talada Qaranka oo loo soo gaabiyo TTQ. Waxay samysantay markii ay isu bahaysatay in ay is hor taagto Xukuumaddii laqmatay ayada oo shan maalmood jirta. Xukuumaddaas oo lagu dhici waayay in Baarlamaanka la hor geeyo waxay hadda fadhiyada siyaasadeed ee Muqdisho qaarkood u yaqaannaan Leef oo ha liqin. TTQ waxaa u madax ah, Cabdullaahi Jaamac oo ah Gaalkacyood.
PIP waa Kutlada magaceedu af Ingiriiska yahay ee loo soo gaabiyo PIP (Public Interest Platform). Waxay samaysantay markii ay damacday in ay badbaadiso Xukuumaddii Leef oo ha Liqin oo la siqiir suujiyay.
Kutladdu ma ahan xisbi siyaasadeed oo diiwaan gashan, Haddana ma jiro qaanuun diidaya in ay Xubnaha Baarlamaanka ee danwadaagta ah ama isku aragtida ahi ay isku hal si u codeeyaan. Waa hab awood siinaya Xildhibaannada magaca qabiil ku galay Baarlamaanka oo haddii qabiil la aado aan heli karin codad tiro badan oo miisaan leh ku leh siyaasadda. Dadka qaar waxay ku tilmaamayaan in kutladuhu ay yihiin nidaam qabiilka looga gudbi karo oo u xuub siiban kara axsaab siyaasadeed. Dad kalena waxay la tahay in ay yihiin caqabad hor leh oo ku soo korortay siyaasadda Soomaaliya oo awalba waayadaan ku dabaalaneysay bad kacsan.
Dhinacyada qaar waxay tuhunsan yihiin in Kutladaha qaarkood ay ujeeddadoodu ka qoto dheer tahay waxyaabaha ay hadda idaacadaha ka sheegayaan.
Waad ku mahadsan tahay in aad akhrisay qormada. Fadlan aragtidaada isla boggan ku reeb.
Posted by Yusuf Garaad at 21:00:00
Soomaaliya, Soomaali baa leh